Malunga nathi - Hebei Gimarpol Oomatshini Technology Co., Ltd.
Hebei Gimarpol Oomatshini Technology Co., Ltd.
Isisombululo sakho sokumisa oomatshini bezemigodi.
Hebei Gimarpol Oomatshini Technology Co., Ltd ise-Shijiazhuang komzi, kwiphondo Hebei. IGimarpol igxile ekuveliseni nasekuthumeleni izixhobo zasemigodini. Uluhlu lwethu oluphambili lwemveliso lubandakanya, i-rig drill, i-drill bit kunye ne-drill rod. Njenge intonga ye-tapered, intambo yentambo, i-chisel kunye neqhosha kunye nezinye izixhobo zokumba umgodi.
Ubuncwane beGimarpol buxabisa ngamnye amathuba kwaye babone ukoneliseka kwabo bonke abathengi njengenjongo yethu. Siza kuhlala sinamathele kwiinkolelo zethu zokuqala ukubonelela bonke abathengi ngeyona nkonzo ibalaseleyo kwaye besifezekisa ukoneliseka kwabathengi ngamaxabiso aphantsi, ulawulo lwemveliso oluphezulu, uqinisekiso lomgangatho olungqongqo kunye nokuhanjiswa kwexesha.
Ngamava ethu atyebileyo ngaphezulu kweshumi leminyaka kunye neenjineli zobungcali kunye neqela lokuthengisa, sijolise ekunikezeleni izisombululo ezipheleleyo zezemigodi.
Sineqela lezobuchwephesha elomeleleyo kushishino, amashumi eminyaka yamava obuchule,
inqanaba loyilo olugqwesileyo, ukudala izixhobo zokusebenza ezikumgangatho ophezulu wokusebenza ngokukuko.
Inkampani isebenzisa iinkqubo zoyilo eziphambili kunye nokusetyenziswa kwe-ISO9001 2000 yolawulo lomgangatho wolawulo lomgangatho wamanye amazwe.
Ekuqaleni kuka-Epreli, abathengi basePeruvia batyelele umzi-mveliso wethu. Emva kokutyelela umzi-mveliso, abathengi banelisekile ngezixhobo zethu zemveliso, izinto ezingasetyenziswanga kunye nenkqubo yokuqhubela phambili yemveliso. Emva kokuhlolwa kwesiza somgangatho wemveliso, abathengi ngovuyo batyikitye ii-odolo ezingama-200,000 zetyala kunye nathi, kwaye sinethemba lokugcina intsebenziswano yexesha elide kunye nathi.
Imigodi ye-23 yezeMigodi eRashiya yagqitywa ngempumelelo kwiziko leMiboniso eManyeneyo eMoscow ngo-Epreli 25, 2019.
Ngexesha lomboniso, u-Hebei SINOBUR Machinery Technology Co., Ltd. waba yindawo ekugxilwe kuyo kumboniso. Ngexesha lomboniso weentsuku ezintathu, sabonisa ubuchule kunye nobungcali kuzo zonke iindwendwe, zisenza umnquba wethu ugcwele.
Inkampani enokuthenjwa kunye nenyanisekileyo
Ngaba Uyazifuna Zonke Iintlobo Zebhithi Zokugrumba?
Umlingane wakho omthembileyo
Ekupheleni kukaMeyi, umthengi wethu ovela e-USA ukutyelela umzi-mveliso, wafunda malunga namandla efektri yethu, waqhuba uthethathethwano kwindawo, kwaye wasayina ubudlelwane bexesha elide kunye nathi.
Imeko yomzi mveliso
Ngamava ethu atyebileyo ngaphezulu kweshumi leminyaka kunye neenjineli zobungcali kunye neqela lokuthengisa
Sijolise ekunikezeleni izisombululo epheleleyo yezemigodi.